Rapti Khabar – Page2– Rapti Khabar
Author: Rapti Khabar
Posted on November 29, 2020 Author Rapti Khabar	Comment(0)
Posted on November 27, 2020 Author Rapti Khabar	Comment(0)
Posted on November 2, 2020 Author Rapti Khabar	Comment(0)
क्रान्तिशिखा धिताल जीवनलाई आफ्नो साधनसँग तुलना गर्ने हो भने कहाँ, कसरी चलाउने भन्ने चालकमा भर पर्छ। तर उसले नै चलाउन पाएन भने चाहिँ कस्तो हुन्छ? आफ्नो गाडी अरूले चलाएर पाटपुर्जा बिगारेर ल्याङफ्याङ पारेको उसले टुलुटुलु हेर्नुपर्‍यो भने कस्तो लाग्छ? तपाईंलाई बिदाको दिन कसैले बोलायो। तपाईंलाई निस्किन मन छैन। एकपल्ट सोच्नुहुन्छ, ‘के भन्ने? निक्कै बल गरेर […]